Automobile n'ihu windshield snow ọta mgbochi ntu oyi na mgbochi icing ọkara ụgbọ ala mkpuchi mkpuchi 5017SBT
Dual ọrụ: The n'ihu windshield snow ọta nwere ike iji mee ihe ma snow na anyanwụ nchedo.
A na-agbakwunye ụdọ mgbochi ohi ọhụrụ: mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị mkpụmkpụ anaghị ehi mmiri, eriri mgbochi na-ezu ohi na-agbakwunye na ụgbọ ala, yana mkpuchi izu abụọ.
5 Arụ Ọrụ retractable Snow shọvel na ahịhịa 7632
Multifunctional telescopic ụgbọ ala snow mwepụ ahịhịa, snow scraper, snow scraper, ụgbọala defrosting, deicing na snow mwepụ ahịhịa 7632SBT
Multifunctional: The snow mwepụ ahịhịa isi nwere ike ekpochapụ snow, na multifunctional obere snow shọvel nwere ike shọvel snow, shọvel ice, defrost, hichapụ mmiri, na wiper nchedo.
Obere shọvel nke snow na-ewepu: obere shọvel shọọlụ nwere ike iwepu iji ghọta ọrụ dị iche iche dị ka shọvel snow, shọvelị ice, defrosting, ihichapụ, na mkpuchi mkpuchi.
5 na 1 Ọrụ retractable Snow shọvel na ahịhịa 7634
Multifunctional telescopic ụgbọ ala snow mwepụ ahịhịa, snow scraper, snow scraper, ụgbọala defrosting, deicing na snow mwepụ ahịhịa 7634SBT
Telescopic ahụ: Aluminom alloy mkpanaka nwere ike gbatịa, na-eme ka mwepụ snow mfe.
6 na 1 Detachable Car Snow shọvel na ahịhịa 4102
Multifunctional telescopic snow mwepụ shọvelụ, snow ahịhịa maka ụgbọala, snow mwepụ ngwaọrụ n'oge oyi, snow mwepụ na scraping osisi, deicing shọvelụ 4102SBT
Multi-function: sọrọ-function rotating ahịhịa isi, nwere ike ekpochapụ snow na snow, multi-function obere snow shọvel ike shọvel snow, shọvelụ ice, defrost, hichapụ mmiri, hichapụ nchedo.
Telescopic ndọtị ahụ: nwere ike nweta atọ ọsọ telescopic, 88cm, 109cm, 124cm, adabara dị iche iche ụdị.
6 na 1 Detachable Car Snow shọvel na ahịhịa 4103
Multifunctional snow mwepụ shọvelụ Telescopic snow ahịhịa, oyi snow mwepụ ngwá ọrụ, ụgbọ ala snow mwepụ na scraper, deicing shọvelụ 4103SBT
Multi-function: Isi nchacha nwere ọrụ nke iwepụ snow na iwepụ snow. Obere shọvel snow nwere ọrụ nke iwepụ snow, deising, defrosting, wiping, na mkpuchi wiper.
Telescopic ndọtị mkpanaka: N'etiti telescopic ndọtị mkpanaka nwere ike kpamkpam gbanwee n'ogologo site na 83 cm 110 cm.
Kemeghi TPE akpụcha Small Snow shọvel 4107C
Anụ anụ aka nwere ike idozi akụkụ sịnịf shịl maka arụmọrụ nke igwe akpachapụrụ anya snow scraper friji na-ehichapụ na shọvel shuga 4107CSBT
Multi-ọrụ: Ọ nwere 3 ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka snow mwepụ, defrosting, na ihichapụ.
Spatula anụ ọhịa beef: dị nro ma na-agbanwe agbanwe, ọ naghị emerụ agba ahụ.
Ergonomic ejiri: Mmaji skid nke okpukpu atọ, obere mbọ na shọvel snow.
Multifunctional Small Snow shọvel 4101
Multifunctional snow mwepụ shọvelụ, snow ahịhịa maka ụgbọala, snow scraper, friji defrosting na deicing shọvel, oyi ngwá ọrụ ọnọde 4101SBT
Multi-function: Họrọ si 3 n'akụkụ iji nweta dị iche iche ọrụ, gụnyere 4 ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka snow shọvel, ice shọvel ya, ntu oyi scraping, na wiper nchedo.
Nha nha yiri nha nha: Mgbe ị na-eji shọvel akpụrụ, ị ga-eji mma nha nha nha. Kpụrụ ezé eze ahụ na-eme ka shọvel ice na-azọpụta ndị ọrụ ọzọ. Ejiri akụkụ mebere agụba ma mebie iko ahụ.
Multifunctional Obere snow shọvelụ na Light 4106
Multifunctional ụgbọ ala snow shọvel snow ahịhịa defrost shọvelụ deicing na snow scraper wiper na ọkụ 4106SBT
Multi-function: The snow shọvel integrates snow mwepụ, frosting, ice shọvel, mmiri ihichapụ, wiper nchedo, ọkụ, na mmesho nke taya azọ omimi.
Edozi mgbochi ileghara imewe: mgbochi ileghara ngọngọ n'elu, mkpịsị aka uzo na ala, mgbochi ileghara warara n'akụkụ, na 3-oyi akwa mgbochi ileghara nchedo.
Achọpụta ihe mkpuchi ihu anyanwụ, mee ka ụgbọ ala ahụ dị jụụ, gbochie ụzarị ultraviolet, onye na-echebe anyanwụ, mkpuchi anyanwụ nke ụgbọala, kwesịrị ekwesị maka ụdị ụgbọ ala dị iche iche 5902SBT
Nchedo Anyanwụ na mkpuchi ikpo ọkụ: imepụta ihe iji gosipụta ìhè anyanwụ site n'ọtụtụ akụkụ. A na-eji akwa aluminom na-egosipụta oyi akwa dị na mbara igwe, nke nwere ike igosipụta ìhè anyanwụ site n'èzí ụgbọ ala ahụ, wee si otú ahụ belata ọnọdụ okpomọkụ n'ime ụgbọ ala ahụ. Mgbaze ọkụ dị omimi na nchebe UV iji gbochie ịka nká nke akụkụ ime ụgbọ ala.
Car Side Window Gauze Sunshade Set 4 mpempe 5025
Side window ụgbọ ala sunshade okpomọkụ mkpuchi ụgbọ ala atọ akụkụ reflective ìhè mkpuchi ntupu 5025SBT
Cargbọ ala raara onwe ya nye: a raara windo anọ maka ụgbọ ala ahụ, a na-ekewa mbara igwe na isi oche azụ na nke inyeaka na usoro aka ekpe na aka nri iji hụ na ụdị ọ bụla nwere ike ịdị mma; n'efu retractable-ọdabara ka ọtụtụ ụgbọala (sedans, hatchbacks, SUVs, ụgbọ ala azụmahịa).
Ezigbo ihe nkpuchi: ihe mkpuchi kachasị na akwa ákwà nche anwụ bụ ihe mkpuchi ọlaọcha nke ọlaọcha (HOUSTIN TIO2), nke nwere nnukwu ndọtị na-agbanwe agbanwe na ọnụọgụ UV nke karịrị 99%. Enwekwara ihe mgbochi mgbochi mejupụtara, akwa mkpuchi mkpuchi dị elu, na akwa mkpuchi na-ekpuchi ọkụ, nke nwere ike ịbelata Belata ọnọdụ okpomọkụ n'ime ụgbọ ala karịa 20-30.